အင်ဖို Landsbygdsriksdag 2018: ယင်းစီရင်စုနယ်အိမ်မှာကျေးလက်ရေးရာဆွေးနွေး 23/11 တွင် 19 | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 17 နိုဝင်ဘာလ, 2016 အားဖြင့် Holmbygden.se
အဆိုပါ 23/11 ဒြပ်ပေါင်းများနှင့် Holmes-Indalsälven-Liden အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ကျေးလက်ရေးရာဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်. ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဆွီဒင်အားလုံးအသက်ရှင်လိမ့်မည် (HSSL) အစည်းအဝေးကိုင်ပြီးပင်နိုင်ငံရေးသမားများကိုဖိတ်ကြားထားပါသည်. အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်Västernorrlandတှငျကငျြးပခဲ့ခံရဖို့ဒါခေါ်ကျေးလက်ဒေသပါလီမန်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် 2018 ထိုသို့န်းကျင်ရှိကျေးရွာပေါင်းဒေသခံလှုပ်ရှားမှုများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါ. ကိုလူအပေါင်းတို့အားနှင့်အတူဖြစ်, HSSL Västernorrland, Sundsvall မြူနီစီပယ်ဒေသခံကော်မတီများပထမဆုံးအစည်းအဝေးကိုယခုကမ်းလှမ်း.
အချိန်နှင့်နေရာ: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 23/11 တွင်. 19-21, Holmes အတွက်စီရင်စုနယ်အိမ်သူအိမ်သား.
နံရံကပျကျွွောငာ: သင်ဖိတ်ကြားချက်ကို print ထုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုစတာတက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် ဤနေရာတွင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ .
HSSL Västternorrland & Sundsvall မြူနီစီပယ်ဒေသခံကော်မတီများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်း (ကို ထောက်. fikats များအတွက်) နောက်ဆုံး 21/11. အရေအတွက်ကများနှင့်စာနယ်ဇင်းစာအုပ်ကို Select လုပ်ပါ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမိုးအုံ့! (အရင်းအမြစ်.)
ဒါဟာမှာ e-mail, Christina Antonsen ဖို့လည်းဖြစ်နိုင် antonsenc@gmail.com eller sms'a / ringa tel.nr. 0730-33 29 44 (Niklas / #ShepherdsHut).
Obs! ဒါဟာအကြောင်းကြားစာအထက်တွင်မှားယွင်းတဲ့နေ့စွဲဖြစ်ပါသည်. မှန်ကန်သောရက်စွဲဖြစ်ပါသည် 23/11.
ဆွီဒင်အားလုံးအသက်ရှင်လိမ့်မည် (HSSL) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုနေတဲ့အမျိုးသားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်5000 တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကို. HSSL အဆိုပါခရိုင်အတွင်းတွင်လည်းရရှိနိုင်- နှင့်စည်ပင်သာယာ. ဆက်ဖတ်ရန်.
Landsbygdsriksdagen ဒေသခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြီးဆုံးနေရာများနှင့်ကျေးလက်ပြဿနာများကိုတစ်ဦးနှင့်အားလုံးဆွီဒင်တို့က 1990 ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကတိုင်းနှစ်နှစ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအသက်ရှင်ရလိမ့်မည်. ဒီမှာပို Read.